PAC-MAN 7.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု PAC-MAN
PAC-MAN ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဘယ်သူသည်ဤပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအိုင်ကွန်၏ retro စွဲလမ်းဂိမ်းကိုမေ့လျော့နိုင်သလဲ 80 ရဲ့အတွင်းဒေသခံ Arcade မှာကျောကုန်အခမဲ့အချိန်နှင့်ရပ်ကွက်၌ရှိသမျှသောသူတို့သည်မရေမတွက်နိုင်သောနာရီသတိမရကြသလော သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာသူတို့အားဂန္ဂိမ်းအချိန်လေး re-နထေိုငျ!
အားလုံးအပေါ်ထပ် retro ဂန္ပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်! ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျကိုသှား PAC-Man ၏အဟောင်းကျောင်းကို Arcade အရေးယူယူခဲ့! ငါတို့သည်လည်း PAC-Man 2015 ခုနှစ်တွင် Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဗွီဒီယိုဂိမ်းခန်းမထဲမဝငျခဲ့ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား
1. PAC-Man Download: Ralph ဒီမှာဝင်္ app ကိုချိုး: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.google.pacralph
PAC-MAN အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PAC-MAN အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PAC-MAN အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PAC-MAN အား အခ်က္ျပပါ
oyebahi စတိုး 30 54.9k
PAC-MAN ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PAC-MAN အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ NAMCO BANDAI Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.bandainamcoent.com/legal/bnea-privacy-mobile/pac-man
Release date: 2019-08-17 04:13:14
လက်မှတ် SHA1: D7:A0:67:47:B5:A2:3C:10:E9:AC:6C:59:27:5E:31:D5:3A:37:5D:A4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Namco Networks America Inc.
အဖွဲ့အစည်း (O): Namco Networks America Inc.
PAC-MAN APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ